Dhijitari Kushambadzira Maitiro & Kufembera | Martech Zone
Kuchengetedza kunoitwa nemakambani panguva yedenda kwakakanganisa zvakanyanya kutengeswa, maitiro ekutenga vatengi, uye edu anoenderana ekushambadzira ano makore apfuura.
Mune mawonero angu, mukuru wevatengi uye bhizinesi shanduko dzakaitika nekutenga pamhepo, kuendesa kumba, uye kubhadharisa nhare. Kune vashambadziri, takaona shanduko inoshamisa mukudzoka kwekudyara mumadhijitari ekushambadzira matekinoroji. Isu tinoramba tichiita zvakawanda, kupfuura mamwe magero nemasvikiro, nevashandi vashoma - zvinoda kuti tivimbe zvakanyanya pahunyanzvi kuyera, kuyera, uye nekushandura manhamba emasangano edu. Kutarisisa kweshanduko kwave kuri pane zvemukati otomatiki uye vekunze vatengi ruzivo. Makambani aikwanisa kutenderera nekugadzirisa nekukurumidza akaona kuwedzera kwakanyanya mugove wemusika. Makambani asina kunge achiri kunetseka kuti adzosere mugove wemusika wavakarasa.
Kuburitsa iyo Dhijitari Kushambadzira Maitiro e2020
Chikwata chiri paM2 On Hold chakadurura kuburikidza neiyo data uye chakagadzira infographic inotarisa pane 9 akasiyana maitiro.
Dhijitari kushambadzira kuri kugara kuchichinja sezvo iri imwe yeanokurumidza-mhanyisa maindasitiri pasirese. Kunyangwe izvi, misoro yemaitiro inoitika uye inotiratidza masimba akakosha anotyaira musika. Iri blog rinodzokorora zvirevo zvekufungidzira zve2020 neinongedzo yeinfographic. Pamwe chete nenhamba uye chokwadi, ngatitarisei mapfumbamwe mafambiro emwedzi gumi nembiri yapfuura pamapuratifomu, tekinoroji, zvekutengeserana, uye kugadzirwa kwemukati.
M2 Pakubata, 9 Dhijitari Kushambadzira Maitiro e2020
AI-Powered Chatbots - Mapurojekiti eGartner ayo chatbots anozopa 85% yekudyidzana kwevashandi uye vatengi vari kugadzirisa zvakanaka, vachikoshesa iyo 24/7 sevhisi, mhinduro yekukurumidza, uye kurongeka kwemhinduro dzakareruka kumibvunzo. Ini ndinowedzera kuti makambani akaomesesa ari kutora machatbots ayo anonyatso shandura hurukuro kuenda kune akakodzera munhu wemukati kubvisa kushungurudzika neruzivo.
Personalization - Mazuva e Anodiwa %% FirstName %%. Yemazuva ano email nekutumira mameseji mapuratifomu ari kupa otomatiki anosanganisira kukamura, kufungidzira zvemukati zvinoenderana nehunhu uye huwandu hwevanhu, uye kusanganisira hungwaru hwekuyedza kuyedza uye kugadzirisa mameseji otomatiki. Kana iwe uchiri kushandisa batch uye blast one-to-akawanda kushambadzira, urikushaya pekutungamira nekutengesa!
Native eCommerce paSocial Media - (Aizivikanwawo Zvekutengeserana Zvemagariro or Native ShoppingVatengi vanoda ruzivo rusina musono uye vanopindura nemadhora kana fanera yekutendeuka isina musono. Anenge ese mapuratifomu enhau enhau (kunyanya nguva pfupi yadarika TikTok) iri kubatanidza ecommerce mapuratifomu mune avo ehukama kugovana kugona, zvichigonesa vatengesi kutengesa zvakananga kune vateereri kuburikidza nehukama uye vhidhiyo mapuratifomu.
GDPR Inoenda Pasi Pose - Australia, Brazil, Canada, uye Japan vakatopfuudza zvakavanzika nedata mirau kubatsira vatengi pachena uye nekunzwisisa maitiro ekudzivirira theri data. Mukati meUnited States, California yakapasa iyo California Consumer Kuvanzika Mutemo (CCPA) muna 2018. Makambani akafanirwa kugadzirisa uye kutora zvakakwana kuchengetedzeka, kuchengetedza, kujeka, uye mamwe marongero kune avo epamhepo mapuratifomu mukupindura.
Kutsvaga Kwezwi - Kutsvaga kwezwi kunogona kuverenga hafu yezvose zvekutsvaga paInternet uye kutsvaga kwezwi kwakawedzera kubva kune edu nhare mbozha kuenda kune smart maspika, materevhizheni, mabara ekuridza, uye zvimwe zvigadzirwa. Virtual vabatsiri vari kuwedzera nekuwedzera kurongeka nenzvimbo-yakavakirwa, zvakasarudzika mhedzisiro. Izvi zviri kumanikidza mabhizinesi kunyatso chengetedza zvemukati, kuronga izvo, uye nekuzvigovera kwese kunowanikwa nehurongwa.
Yakareba-Fomu Vhidhiyo - Pfupi kutarisisa spans ingano isina hwaro iyo inogona kunge yakakuvadza zvakanyanya vashambadzi pamusoro pemakore. Kunyangwe ini ndakazviwisira, ndichikurudzira vatengi kuti vashande pakuwedzera kuwanda kwemashoko emashoko. Iye zvino ndinopa zano vatengi vangu kuti vanyatsogadzira zvemaraibhurari zvemukati zvakarongeka, zvakaringana, uye vape zvese zvakadikanwa kuzivisa vatengi. Vhidhiyo haina kusiyana, nevatengi nevatengi vebhizimusi vachidya mavhidhiyo anodarika maminetsi makumi maviri pakureba!
Kushambadzira Kuburikidza neMessage Apps - Nekuti isu tinogara takabatana, mameseji akakodzera panguva akakodzera mameseji anogona kutyaira kuwedzera kubatanidzwa. Kunyangwe iri mobile app, browser ziviso, kana mu - saiti ziviso ... mameseji atora senge yekutanga chaiyo-nguva yekutaurirana svikiro.
Kuwedzera Kwechokwadi uye Virtual Reality - AR & VR ari kuverengerwa muma mobile apps uye akazara browser ruzivo rwevatengi. Kunyangwe iri nyika yepamoyo apo urikusangana newako mutengi kana pamwe uchitarisa vhidhiyo… kana nharembozha kuti uone kuti fenicha nyowani inotaridzika sei mumba yekutandarira, makambani ari kuvaka akasarudzika mafambiro anowanikwa kubva pachanza cheruoko rwedu.
chakagadzirwa Intelligence - AI uye kudzidza kwemuchina kuri kubatsira vashambadzi kuita, kugadzirisa hunhu, uye kukwidziridza expeirences yevatengi zvisati zvamboitika. Vatengi nemabhizimusi vari kuneta nezviuru zvemameseji ekutengesa ari kusundidzirwa kwavari zuva rega rega. AI inogona kutibatsira kununura ane simba, anotora mameseji kana achinyanya kuita.
Mune infographic pazasi, tsvaga iwo mapfumbamwe emusoro mafambiro kubva 2020. Iri gwaro rinoburitsa maitiro aya maitiro kukanganisa musika uye mikana yekukura yavanopa izvozvi.
Tags: aiai chatbotschakagadzirwa njerechatbotszvemukati zvekushambadzira maitiroemail kushambadzira maitiroFacebookinfographickushambadzira otomatiki maitirokushambadzira maitironharembozhachizvarwa kunotengakugadzirisa mutauro mutauronlppersonalizationPersonalizationPinterestchinzvimbo2Predictionskufanotaura nezvakozvikamusnapchatzvekutengeseranaevanhu vezvenhaumagariro enhau mafambiroTikTok
Pasina mubvunzo, yako blog ndeye sosi huru yeinoshamisa infographics. Zvakare, zvinyorwa zvese zveblog rako zvakanyorwa zvinehunyanzvi uye zvakanyatso nyorwa.
Kutenda nekugovana ruzivo infographics!
Ndira 20, 2014 na11: 36 PM
Douglas Karr ! Chaizvoizvo inodzidzisa chikamu. Iwe wakanganiswa nezvakanaka dhizaini, mazano. Kamwe zvakare Thanks zvakanyanya
Feb 12, 2014 at 7:35 PM
Gore idzva rinounza naro, hukuru mikana uye nepamhepo nzvimbo iri kuwedzera kuoma nezuva. Iyo indasitiri iri kuramba ichichinja, asi ndizvo zvinoita kuti ive inonakidza kwazvo.
Hongu, Icho chokwadi ndechekuti gore rega rega ini ndinoedza kuendesa zvandinofunga pane izvo zvichange zvichinakidza
uye yakakosha muapuro yejenda bhizinesi uye ecommerce yegore
Chaizvoizvo inodzidzisa posvo. Ichi chaicho chakanakisa posvo. Iwe wakawedzera ruzivo rwakawanda mu blog yako. Ndatenda nekugovana iyi yakakosha ruzivo. Inobatsira chaizvo uye inodzidzisa zvakare.
Jul 30, 2014 pa 7: 23 AM
Hi Douglas iwo matipi aishamisa. Ramba Uchiposa.
Aug 3, 2014 na1: 02 PM
Yakakura uye Inobatsira Infographic Douglas! Iye zvino ndinoziva kuti vanenge vanoita sarudzo mubhizinesi repasirese vanosarudza kushandisa Yemagariro midhiya kune avo ese ebasa zvinhu Kutenda nekugovana!
Nov 7, 2020 pa10: 52AM
Matipi akanaka. Ramba uchitumira
Nov 7, 2020 pa10: 53AM
izvi zvirimo zvichiri kushanda muna 2021?
Aug 25, 2021 na12: 21 PM
Mhoroi John, ndinofunga mafambiro egore ra2014 akatendeka kwazvo parizvino, achifambiswa mberi nevanhu vanoshanda kubva kumba uye vachitenga kubva kune zvavo nharembozha.
Iwe wakandikurudzira kuti ndiwedzere iyi posvo ye2021 ine yakakura infographic uye ruzivo kubva kuM2 On Kubata.